Xulka gobalka Nugaal oo galabta guuldarro 5-1 ah ku sagootiyay xulka dhigooda ah ee gobalka Mududg.
Saturday November 29, 2008 - 20:00:32
Waxaa heer gabo gabo ah maraya tartanka kubada cagta 18-aad ee gobalada dalka Soomaaliya oo qeyb ahaan iminka ka soconaya magaalada garowe ee xarunta maamul gobaleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaana tartanka oo semifinalkiisu soconayo galabta la macsalaameeyay xulka gobalka Mudug oo sidaa ku haray.
Wiish” Xiriirrada kale waxaan ugu baaqayaa in Kubada cagta oo kale ay dhaqaaq weyn sameeyaan”
Saturday November 29, 2008 - 18:34:37
Ku simaha guddoomiyaha guddiga Olombikada Soomaaliyeed Aadan Xaaji yabarow (Wiish) ayaa ku amaanay xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta talaabada horumarka leh ee uu horay u qaaday waxaana uu ku guubaabiyay xiriirada qaran ee kale ee hoos yimaada GOS in ay maseyraan oo ku daydaan xiriirka kubada cagta.
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta oo maanta qabtay munaasabad lagusoo bandhigayay wax qabadka xiriirka ee sanadkan.
Saturday November 29, 2008 - 13:08:39
Munaasabad si heer sare ah loosoo agaasimay oo lagu maamuusayay soo andhigitaanka wax qabadka xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta sanadka 2008-da ayaa waxaa maanta lagu qabtay xarunta guddiga Olombikada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho,wax qabadkaas oo ay ka mid tahay in xiriirku uu sanadkan hawada…
Xulka Gobalka Mdudg oo guul darro sagootin ah dhabarka u saaray xulka gobalka Sool .
Wednesday November 26, 2008 - 10:09:32
Cayaartu waxaa ay ahady mid aad u kulul oo labada gobal mid waliba uu haminayay in uu badiyo iyadoo taageerayaashuna ay is dhaafsanayeen hadallo xamaasadeysan oo ay qola waliba kuwa kale ku lahayd CIIDA AYAANU IDIN CABSIIN DOONAA,laakin ugu dambeyntii waxaa ay ku dhamaatay 4-3 oo gobalka Mudug uu ku…
Meydka guddoomiyihii hore ee kubada cagta Soomaaliya Faarax Sendiko oo Maanta Muqdisho la keenay berri-na lagu aasayo
Monday November 24, 2008 - 21:10:12
Waxaa maanta la keenay Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Dalka Soomaaliya Meydka guddoomiyihii hore ee kubada cagta Soomaaliya Marxuum Faarax Wehliye Caddow (Faarax Senidko) oo habeenkii Arbacada ee lasoo dhaafay ku geeriyooday Magaalada Qaahira ee Dalka Masar.
Xulalka Goballada Mudug iyo Bari oo galabta bar bar dhac 3 iyo 3 ah isla dhaafi waayay.
Sunday November 23, 2008 - 22:51:57
Iyadoo garoonka Mire Awaare ee magaalada Garowe ay si xoosa leh iminka uga soconayaan cayaaraha 18-aad ee goballda dalka Soomaaliya oo wareegoodii labaad uu soconayo ayaa waxaa galabta wada cayaaray goballada Mudug iyo Bari,waxaana cayaartani ay ka mid ahayd cayaarihii ugu dawashada badnaa tan iyo intii…
Guddoomiye ku xigeenka GOS ee xiriirka Caalamiga ah Duran Farax” Xiriirka kubada cagta Soomaaliya waxaa uu qaaday talaabo ku dayasho mudan”.
Friday November 21, 2008 - 10:13:42
Guddoomiye ku xigeenka guddiga Olombikada Soomaaliyeed ee xiriirka Caalamiga ah Mudane Duran Axmed Faarax ayaa amaan iyo bogaadin usoo jeediyay xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta oo haatan wada mid ka mida howlihii ugu balaarnaa ee lagu horumarinayo cayaarta kubada cagta ee dalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta isboortiga Soomaaliyeed Cabdi Casiis Godoax Barre oo hambalyo u diray xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta.
Friday November 21, 2008 - 09:52:31
Guddoomiyaha Ururka Saxafiyiinta Isbooriga Soomaaliyeed Mudane cabdi Casiis Goodax Barre ayaa madaxda iyo guud ahaan xubnaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta ugu hambalyeeyay wax qabadkoooda gaar ahaana cayaaraha gobalada ee uu xiriirku haatan qeyb ka mida ku qabanayo magaalada garowe ee xarunta…
Wareega labaad ee is reeb reebka cayaaraha gobalada dalka oo shalay ka furmay magaalada Garowe.
Friday November 21, 2008 - 08:44:34
Shalay gellinkii dambe ayaa garoonka Mire Awaare ee magaalada Garowe waxaa ka furmay wareega labaad ee is reeb reebka cayaaraha kubda cagta 18-aad ee gobalada dalka Soomaaliya waxaana madaxweyne Ku xigeenka maamulka Puntland Xasan Daahir Afqurac lagu sharfay in uu cayaarta furo,iyadoo xiligaana ay is…
Xaflad lagu maamuusayay furitaanka cayaaraha kubada cagta gobalada Puntland oo saaka ka dhacday Garowe.
Thursday November 20, 2008 - 13:48:38
Saaka ayaa magaalada garowe ee xarunta maamul gobaleedka Puntland waxaa ka dhacday munaasabad balaaran oo lagu maamuusayay furitaanka tartanka 18-aad ee kubada cagta gobalada Soomaaliya is reeb reebkiisa 1-aad ee gobalada Puntland.
Marxuum Faarax Sendiko halgamaa darajo sare ka gaaray isboortiga gudaha iyo dibada (Taariih nololeedkiisii) “Baroor diiq sadex maalin ah oo looga dhawaaqay xarunta xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed”
Thursday November 20, 2008 - 09:11:07
Alle ha u naariistee Guddoomiyihii hore ee kubada cagta Soomaaliya iyo guddiga Olombikada Soomaaliyeed faarax Wehliye Cadow Sendiko ayaa xalay abaara 10:30 habeenimo waxaa uu ku geeriyooday magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar,isagoo dhawaana kasoo laabtay dalka Mareykanka.